mapositori mari baba mwana gumbura church rufu pentecostal
chinoz akananga jobheki
Rimwe zuva Chinoz akafunga kuenda kuSouth Africa, ndokutenga ticket number 8 rebhazi rePathfinder.
Sezvo bhazi rePathfinder rine mamwe maseats epasi mamwe emudenga,Chinoz rake renumber 8 renge riri repasi asi iye akaita nharo ndokunogara repamusoro number 40.Murume enge and number 40 paakauya Chinoz akaramba kusumuka. Murume uya akano reporter kusecurity yekwaPathfinder asi vakamukoniwa.
Mumwewi blazo ndokusimuka akandozevezera Chinoz munzeve,pakarepo Chinoz ndokurongedza zvinhu zvake ndokuenda paseat repasi.
Vanhu vakashamisika vakabvunza murume uye kuti akange amuzevezera kuti kudii, iye ndokuti ndamuudza kuti maseats epamusoro arikuenda kuMalawi epasi ndiwo arikuenda kuSouth Africa